Uyini umjikelezo weplank? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Isifunda sePlank - imibuzo nezimpendulo ezisohlwini
Isifunda sePlank - imibuzo nezimpendulo ezisohlwini
Uyini umjikelezo weplank?
Qala kuipulangweisikhundla, izindololwane zakho zigobile nezingalo zakho phansi. Beka isandla sakho sobunxele phansi, bese kuba esokunene, bese welula izingalo zombili uze ube sesikhundleni esiphezulu se-pushup. Kummeli wakho olandelayo, qalisa ukuhambisa ngesandla sakho sokudla. Phinda imizuzwana engama-30.UMar 21 2014
Ngakho-ke namuhla silungiselela inselelo enkulu endizayo. Kepha okokuqala, ngithanda ukubonga i-Squarespace ngokuxhasa le ndatshana, futhi ngizokunikeza imininingwane ethe xaxa ekugcineni kwendatshana.
Okplanks ngiyawathanda amapulangwe ngoba kulula futhi kungenye yezivivinyo ezisemqoka ezisebenza kakhulu ukwenza izinhlelo zokusebenza. Isebenza umsipha womgogodla ojule kakhulu osiza ithoni yonke leyo maphakathi nendawo okhalweni oluncane futhi kusizile nokusebenza izingalo zamahlombe isifuba-emuva-ukuphanga-kushiye umzimba oshisayo ogcwele njengoba usebenza okhalweni lwakho futhi u-abs noBubbles bazoba lapha nathi. Vele uphole futhi ubuke osebenza nabo abasebenza kahle.
Ngikwenzile, ukusha kuhle impela futhi ngokubambisana singakukwenza Kuzoba nokuzivocavoca umzimba okungu-10 okunezinhlobonhlobo zamabhodi Kuzoba mnandi futhi empeleni ngizothatha ikhefu lemizuzu ngemuva kokuzivocavoca oku-5 kokuqala ukuze siqale ikhefu elincane, lapho-ke ngiyathembisa ukuthi ngeke uzisole ngoba kuyasebenza. Ngakho-ke ayikho inkinga. Sikutholile Kulungile, ake siqale Ukuzivocavoca kokuqala ipulangwe lendololwane elijwayelekile lokukhahlela umzimba wethu ikakhulukazi indawo yesisu Izindololwane ebubanzini bephansi phansi zihlukane zakha unxantathu ngezingalo zakho ngemilenze yakho umgogodla nentamo umugqa oqondile hlala phansi, esikhundleni sokuyifihla emoyeni futhi ungasebenzisi imisipha yakho, ukhiye lapha ukubamba iqina lakho liqinise bese ucindezela inkinobho yakho yesisu ulibhekise emgogodleni wakho, mane ulibambe kuze kube yimizuzwana engama-45 lapha phezulu, setha inhloso yakho ngalokhu kuzivocavoca umzimba , ngikukhumbule lapho uya khona, yini ekuletha namuhla? Futhi yini ofuna ukuyizuza ngalokhu kuzivocavoca umzimba futhi yini ofuna ukuzithembisa yona? Uzoyicindezela impela bese uziphonsela inselelo yokunikela ngakho konke ukugcina kwakho lapho.
ungazilungela kanjani ngaphandle kokuzivocavoca
Asiwi phansi Umsebenzi omuhle besicabanga ukuthi ngumqansa uLowell osendaweni yesibili? Qalisa futhi ubeke ipulangwe leHubble, yingakho ihlombe eliphansi lishaya kuzinhlelo zakho zokusebenza, letha idolo ukubuka indololwane yakho ngasohlangothini olufanayo. Lokhu kuphindaphindwa kuka-Alton imizuzwana engama-45. Khumbula, sikwenza kancane nangendlela elawulwayo lapha.
Ngifuna uzwe ukusha ku-abs yakho yangaphakathi nangaphansi nge-rep ngayinye. Qhubeka, ngilapha kuwo wonke ama-rep single, amasekhondi ayishumi Yebo, kuzoba nzima, ngiyazi, kepha sifuna umphumela ngakho-ke akukho buhlungu obungeyona inzuzo Okwesithathu yi-plank-to-dolphin pose, qala ipulangwe lendololwane isikhundla bese uphusha izingalo zakho nezindololwane zakho phansi bese uphusha amahlombe akho, uqhekeze i-abs yakho bese uphakamisa okhalweni lwakho ukuze wakhe indawo eguquliwe. Lokhu kuyi-dolphin pose, bese wehlisa okhalweni lwakho bese ubuya nomzimba wakho ngomugqa owodwa oqondile ubuyele epulangwe lendololwane.
Phinda imizuzwana engama-45, kufanele uzwe kusha ku-abs izingalo zakho zezingalo bese kuthi emuva ukusha kukhule kakhulu, kepha ungapheli amandla, asimisi ukuphefumula, phefumulela lapha. Qhubeka kuze kuphele isikhathi Hhayi okwenzelwe ipulangwe elinomlenze owodwa, ukuzivocavoca engikuthanda kakhulu ngaso sonke isikhathi lapha Sisebenza phakathi nendawo, esifubeni nasemzimbeni ophansi futhi, ikakhulukazi ipulangwe lendololokuphangiwe, siphakamisa umlenze owodwa phansi ukhama impango yakho uyibambe imizuzwana engamashumi amabili nambili ngaphambi kokuthi sishintshe izinhlangothi. Zama ngakho konke okusemandleni ukuthi ungayilahli phansi - eyodwa oh kunzima kakhulu kepha sesicishe lapho sengihlupheka lapha kanye nani hlalani niqinile bafana niyomangala ukuthi yini engenziwa ngumzimba wenu yebo niyibambe umsebenzi omuhle osebenza nabo badlale i-hip Dip okokugcina ukuzivocavoca ngaphambi kwekhefu lomzuzu owodwa.
Ngakho-ke ake siphinde siyicindezele. Buyela esimeni sepulangwe lendololwane, bamba isisu sakho ngokuqinile bese usebenza ku-ABS - vula okhalweni lwakho eceleni bese ucwilisa umzimba wakho ukuze uthinte kancane iphansi Hlanganisa phakathi kwezinhlangothi imizuzwana engama-45, udonsa inkinobho yakho yesisu ubheke emgogodleni wakho isikhathi sonke Ukuthola iMax Burn on Your Deepest Inner Core Muscles and Side Ups Ngakho-ke sisebenzela ukuthola okhalo oluncane Ungalahli abafana, qhubeka unyakaze, ungakwenza. Ngiyazi ukuthi ningakwenza lokhu, umsebenzi omuhle bakithi, lokho bekungukusha okukhulu manje? Ngaphambi kokuba sigijimele engxenyeni yokugcina yokuzivocavoca, masijabulele ikhefu lethu elifanele umzuzu owodwa - manzi amanzi bese sixhawula izingalo zakho.
Ingabe kuyamangaza engxenyeni yokuqala yalokhu kuzivocavoca umzimba? Singayiqeda iqine. Kulungile bakithi, cishe sekukhona. Ake ngikukhombise abafana ukuzivocavoca i-Side Plank yesithupha Okunye ukuzivocavoca okumangazayo kwangaphakathi nohlangothi lwe-abs okungalolonga ngempela indlela yethu ekukhuphukeni kwe-M phansi, iminwe phambili, izindololwane ngezansi nje kwehlombe lakho nezinyawo zakho zibeke esinye isandla okhalweni lwakho , phakamisa izinqa zakho phezulu ukuze umzimba wakho uqonde ngqo, sebenza uhlangothi lwe-abs yakho ukugcina umzimba uphakeme, lokhu kuzosiza ukususa isisindo engalweni yakho futhi kuhlose ngempela ohlangothini lokugcina inkinobho yokusha ngemuva kwemizuzwana engama-22 , ibambe kuze kube sekupheleni.
Ungahlola nephathi yami ye-puppy ukuze uziphazamise. Okuyisithupha phansi, okunye okune kokuhamba ngokuzivocavoca okuyisikhombisa yi-Spider-Man Plank Elbow Plank Concession futhi ukuze uqale ukushaya uhlelo lwakho lokusebenza ukuletha idolo ngasohlangothini olufanayo ulibhekise endololwaneni yakho.Lokhu kuyimpendulo phakathi kokuhlala ngithi lokhu kungukuzivocavoca umbulali ngoba ayisebenzi nje kuphela imisipha yomgogodla ejulile kepha ne-abs ephezulu nangaphezulu ebusweni.
Ngakho-ke kungukusha okukhulu kakhulu ukuze unciphise futhi ukhulume kahle indawo yakho yesisu. Hlalani niqinile madoda, ngeke ngiyeke. Nginike amanye ama-reps ambalwa.
Sesiqedile Lokhu kuwumsebenzi onzima, kepha senze izivivinyo ezintathu kuphela ukuzibonisa ukuthi yini ongayenza. Ipulangwe Elisishiyagalombili Elilula Ngempela Kulula Ukuthola Ipulangwe Eliphezulu Eliphezulu Phakamisa ingalo eyodwa ukuyisiza ikhuphule ithanga lakho noma yini oyithandayo vele uyibambe lapho imizuzwana engamashumi amabili nambili ngaphambi kokuba sishintshe izinhlangothi. Zama okusemandleni akho ukubamba umzimba wakho up.
Kugcine kulayini oqondile. Ngiyazi ukuthi ufuna ukwehla nami ngifuna, kepha angikwazi ukwehla Noma ngabe kunzima kangakanani, ngizohlala lapha. Ngakho-ke isibali sikhathi siphelelwe yisikhathi ngoba angazi buphi ubuhlungu noma inzuzo.
Ngiyathembisa ukuthi kuzokufanele. Ngakho-ke yiphakamise nami lokho bekungukusha okuhle emahlombe nasezingalweni ze-ABS, ake sibambelele emizuzwini emibili yokugcina eyisishiyagalolunye Siqala ngomyalo futhi ngemuva kwemizuzwana engamashumi amabili nambili sishintshele kwiplanethi phezulu naphansi Ngakho-ke ngenza ngendololwane ipulangwe liqale Cindezela ingalo yakho yangakwesokudla kuqala bese ingalo yakho yesobunxele epulangwe eliphezulu. Buyela epulangweni lendololwane ngokuza futhi phansi ngengalo eyodwa bese ubuya kwenye.
Lokhu ukusha okukhulu emzimbeni ongenhla, kepha yilokho esikulungele. Phinda imizuzwana engama-22 bese siqonde phezulu nangaphansi kwepulangwe, isibhakela sendololwane sizokucela ukuthi unyuse izinkalo zakho phezulu naphansi, kubukeka kumnandi. Kepha lokho kubhekiswe ngqo ku-F esikufunayo.
Ngakho-ke yiphakamise lapho uya phezulu naphansi lapho usha kakhulu Wenza kahle umsebenzi owodwa nje wokugcina ukuze uvuke Masikuqede kudlala ama-jacks kokusha kokugcina Siqala ngamasheke aphezulu epulangwe kumasekhondi angamashumi amabili nambili wokuqala futhi bese kuthi ngamaphakethe endololwana, qala ukuzivocavoca okuphezulu kwepulangwe nge-abs yakho, gxuma imilenze yakho ibanzi, uphinde uqonde futhi. Uma ugxuma ngokushesha, iba namandla ngokwengeziwe, kodwa ungakhohlwa ukugcina isikhathi sakho esiyisisekelo sokusimamisa umzimba wakho ophezulu. Phinda imizuzwana engama-22.
Ngemuva kwalokho sehlisela izingalo zethu emapulangweni endololwana ngenkathi imilenze yethu iphinda ukunyakaza okufanayo ngokugxumela ngaphakathi nangaphandle. Jump abafana abasheshayo ngemizuzwana engaphansi kwengu-30 ukuze ubalande. Khumbula izinhloso zakho, zinike umlilo wokugcina owusebenzele kanzima O nkosi yami, oh nkosi yami Futhi sikwenzile, ukumemeza nokukhononda ngakho konke okudingayo, zinike ezinhlanu eziphakeme, Bob wonke umuntu, okunikeza okuhlanu okuphezulu lapha futhi, ngiyabonga ngokubeka leso sigqoko, sebenza nami futhi lokhu kubala kubalulekile.
Khumbula ukwelula okuncane futhi, nakhu okulula noma ungaya njalo kudatshana lami eliphelele ngaphambi kokuvalelisa. Nalu ulwazi oluthe xaxa lwe-Squarespace, ngokuyisisekelo banikela ngeplatifomu enamandla futhi enhle ye-inthanethi yokwakha iwebhusayithi yakho ngezifanekiso eziwina imiklomelo. Akukho lutho lokumaka noma lokuthuthukisa.
Konke kukukodwa, futhi kunikezela ngesipiliyoni sesizinda esisodwa esisobala ngokuphelele futhi okulula ukusetha. Manje usungaya ku- squarespace.com ukuthola isivivinyo samahhala nesaphulelo esingu-10% ekuthengeni kwakho kokuqala.
Nginamathisela futhi isixhumanisi ebhokisini lezincazelo elingezansi futhi yilokho okwanamuhla ngizokuvumela uzelule futhi uphumule futhi sizokubona futhi maduzane Kusebusuku
Ngabe ipulangwe elingu-1 lenza noma yini?
Amapulangweukuzivocavoca umzimba okulula futhi okugcwele amandla lokhocanikusize wakhe amandla emzimbeni wakho ophansi nangaphezulu, faka umnyombo wakho, futhi uzinzise amalunga akho. Ngishoukwenzanjeumzuzu owodwayeamapulangweusukucanfezekisa imiphumela emangalisayo ngokuhamba kwesikhathi, ngakho-ke qalisa namuhla!UMashi 18 2021
Ngamangala ukuthi akuzange kube lula. Ngangicabanga ukuthi kuzoba lula kanti futhi kwakukubi nje kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. (upbeat music) - Ukuthi le nselelo izoba yini ukuthi senza ama-doplanks imizuzu engama-30, imizuzu emithathu ngezinsuku ngesikhathi, ^ futhi sizobona ukuthi singakwazi kanjani ukufika emaplanking ^ nokuthi singabamba isikhathi esingakanani.
Isu lami kuzoba ukuthi ngishayele isikhathi eside ngangokunokwenzeka bese ngikhipha leso sikhathi kusuka emizuzwini emithathu ukuze ngibe nokuncane engingakwenza usuku lonke, kodwa ngeke kube kuhle - isikhathi siqala manje futhi vele uyathuthumela. Sengivele ngithuthumela - imizuzwana eyi-10, kuzwakala sengathi iyinto engasho lutho - Inhloso yami bekuwukwenza ipulangwe lemizuzu emithathu kungabikho ikhefu phakathi. Ngakho-ke ngiqale ngokudlula umzuzu, kancane.
Ngiqonde ukuthi, ngemuva kwemizuzwana engama-30, ngangivele ngithuthumela. Bekuyisikhathi esincane kakhulu .- imizuzwana engama-45. - O, lokho kuyabheda. - Kulungile, lokho bekungumzuzu.
Kwakuyinto nje efana nokuthi ihlala imunca u-h, nakanjani i-shit namuhla, iyamunca, kufana nokuthi umnyombo wami uqhaqhazela futhi ubuthakathaka - ngicabanga ukuthi ngibone ukuthuthuka kushesha kakhulu kunalokho ebengikucabanga. Abathathu, babili, munye, oh nkosi yami, kulungile, leyo bekuyimizuzu emibili yokuqala ngakho-ke sawubona! Lokho bekupholile. Ngenze ipulangwe lemizuzu emibili ngacabanga, kuhle, asihambe.
Siya lapho, sibona ukuthuthuka. Ngokushesha ngemuva kwalokho, ngikwazile ukwenza iplangwe lemizuzu emi-3 okokuqala ngqa, kulungile-ke sizongena ekupheleni kwesonto lokuqala futhi empeleni sengicabanga ukuthi kuhamba kahle impela. Okubili, okukodwa (ukuphuma) (kububula) Okubili, okukodwa, asihambe.
Sikwenzile, sikwenzile, sikwenzile. Angikholwa ukuthi ngenze nje ipulangwe lemizuzu emithathu. Angikaze ngenze iplanking isikhathi eside kangaka empilweni yami.Le nselelo yepulangwe ibiyingxenye enzima kunazo zonke - ngasungula indlela ebizwa ngeFrasier Method.
Ngizozama into entsha ngibheke i-Frasier ngoba kwesinye isikhathi uma ngenza ipulangwe ngiyadinwa ngivele ngicabange ukuthi limunca malini bese liya ngokuya likhula. Ngakho-ke mhlawumbe lokhu kuzoba ngcono. - Kumane kuyisicefe esinegazi.
Nginomuzwa wokuthi ngingenza lokhu isikhathi eside uma ngibuka i-athikili ye-YouTube noma okufana nakho. Uyazi ukuthi angiwulaleli umculo noma ngifunde incwadi lapho kufanele ngibe nayo. Ngubani owaziyo ukuthi bengingenzenjani ukube benginencwadi eyodwa nje phambi kwami? (Abesilisa bayakhuluma) - Ngenze imizuzu yami yokuqala emibili, nginomdlandla omuhle.
Indlela yeFrasier isebenza ngokuphelele. Ngiwumkhulu wokuqina, ngiyayithanda. (Umculo we-Rock) - Noma ngiphelelwe umoya, angizwanga ngiphelile.
Ngizwe kamnandi emva kwala mabhodi. Ngizwe, uyazi, ngiqine ngokwengeziwe futhi ngazizwa ngifana namandla. Ngicabanga ukuthi ngangazi ukuthi uma sengikwenzile, ngingaqhubeka nokukwenza. - Nganginomuzwa wokuthi akekho umuntu owayengisekela, ngangifana 'shit' ngaze ngabe ngisafuni ukukwenza.
Kunzima ukwenza amapulangwe kunalokho ebengikucabanga futhi angikaze ngizwe sengathi ngiyaqina - sengikulungele - Kulungile (uyahleka). Um, yebo ngikhona. Yebo, ngibona sengathi kunomehluko omncane.
Sikhuluma ngakho, sikhuluma ngomehluko omkhulu kakhulu. - Ngizizwa sengathi kukhona umehluko omncane, kepha hhayi kakhulu, ebengikulindele. Ngithole engikufunayo kule nselele futhi lokho bekungukuzizwa ngincono futhi bekungukuzibonakalisa kimi ukuthi ngiyakwazi ukukwenza.
Ngingumfana super super super super super super ngijabule ukuthi ngenze imizuzu emine futhi angikaze ngicabange ukuthi ngingagcina ngenze ipulangwe lemizuzu emine. Ngijabule kakhulu ngakho - ngisho, kuhle ukuthi ungenzi inselelo ethi, 'O, sizoba nezinsuku ezingama-30 ngoba asidlanga lutho futhi sasebenza nomqeqeshi wosaziwayo.' , besisekhishini lethu nje futhi sakha amabhodi futhi asishintshanga lutho.
Ngabe ukuqeqeshwa kweplanking circuit?
Ipulangwekungenye yezivivinyo eziphumelela kakhulu ukukhomba umzimba wakho wangaphakathi nomzimba ongaphezulu. Nayi iminithi engama-20ukuqeqeshwa kwesifundaukuhlanganisa ukuhlukahluka okuyisithupha okuguquguqukayo kwesisekeloipulangwe- khumbula ukwelula umhlane nezingalo imizuzu embalwa ngemuva kokuphothula konke lokhoamapulangwe.Juni 27. 2015 g.
Ngabe ukubamba ipulangwe imizuzwana engama-30 kuhle?
I-ipulangwekuyintokuhleyokuqinisa ingqikithi yakho nokubaza i-abs yakho. Kepha umqeqeshi uqobo uMax Lowery uthi ukuvivinya umzimba abona kaningi ukuthi kwenziwe ngokungalungile. Unenqubo yeebambeiipulangweisikhundla esizokwenza ukuthi ukujima kwakho kuphumelele ngokwengeziwe - futhi kufanelebambait for njeImizuzwana engama-30.UJan 24. Okthoba 2018
Ungalithola iphakethe eliyisithuphakusukaamapulangwe?Wenangekethola eziyisithupha-pack abs kusuka nje planking. Amapulangwe awukuzivocavoca okuhle kakhulu ukuqinisa ingqikithi nokuthuthukisa eyakhoeziyisithupha-pack ABS.
Ingabe amapulangwe afana nokuhlala phezulu?
Ukuqinisa wonke umnyombo wakho kubalulekile ekuhlinzekeni ukwesekwa kwawo wonke umzimba wakho ngesikhathi sokunyakaza kwansuku zonke, futhi kungasiza ekunciphiseni ubuhlungu bokubuyela emuva nokwenza ngcono ukuma komzimba. Futhi,ipulangweizivivinyo zishisa ama-calories amaningi kunehlala-phezulunoma ama-crunches ngoba basebenzisa imisipha emilenzeni, ezingalweni nasemuva.UMashi 12 2021
Kwenzekani uma wenza ipulangwe lemizuzu emi-2 nsuku zonke?
Amapulangweukukhetha okuhle kakhulu kokuvuselela umzimba wonke,uma ungakwenza nsuku zonke,wenashisa ama-calories amaningi kunanoma yikuphi ukuzivocavoca okuvamile kwemisipha yesisu njengama-push ups. Imisipha eqiniswa yilo msebenzi nsuku zonke iqinisekisa ukushiswa kwenani lamandla aphakeme kakhuluniniehlezi.Julayi 31. UDisemba 2019
Kwenzekani uma wenza amapulangwe nsuku zonke?
Kunezinzuzo eziningi ezingezona ezobuhleamapulangwe
Umnyombo oqinile ubalulekile ekuvikeleni ukulimala futhikuthandathuthukisa kakhulueyakhoukusebenzisa nekhono lokuhambisa okuningi, futhi. 'Amapulangwekubuye kube kuhle ngengalo, intamo, namandla wehlombe, njengewenangidinga ukubambaeyakhoisisindo somzimba.UJan 8 Februwari 2020
Ngabe ipulangwe lemizuzu emi-3 lihle?
Ukuplank kuyintokuhle kakhuluindlela yokuphonsela inselelo umzimba wakho wonke. Ukuzenza nsuku zonke - nje3 imizuzu- ishisa amakhalori amaningi kunezinye izivivinyo zendabuko zesisu, njengama-crunches noma ama-sit-ups. Imisipha oyiqinisa lapho wenaipulangwenje3 imizuzuusuku qinisekisa ukuthi ushisa amandla amaningi noma ngabe awusebenzi.3 jul. UDisemba 2019
Ngabe ipulangwe lesibili lama-30 alilungile?
Kuyavela, akukude kangako. Isikhathi esifanelekile sokubambaipulangwe, ngokusho kuka-Austin Lopez, i-CSCS kanye nomnikazi we-Ausome Fit, kukhona endaweni ethile ebangeni lama-20-Imizuzwana engama-30. Ukuze kube wumsebenzi osebenzayo oyisisekelo, kufanele uqedwe njengokunyakaza okukhulu, 'kusho u-Austin etshela iPOPSUGAR.30 uNovemba. 2017 Nov.
Kuze kube nini ukwenza ipulangwe lemizuzu emi-5?
Imiyalo Ekhethekile Yabaqalayo: Yenza umsebenzi ngamunye ngendlela yesifunda yamarounds ayi-1-3 aphelele. Misa ukuzivocavoca ngakunye lapho usufinyelele cishe ku-75% wokuzikhandla kwakho okuphezulu, bese udlulela kokulandelayo ngokushesha. Phumula imizuzu engu-1-2 phakathi kwamasekethe. Zonke izivivinyo zibanjelwa isikhathi.
Ngabe ipulangwe langaphambili liyafana nepulangwe eliseceleni?
Uzobona ukuthi ipulangwe elijwayelekile elingaphambili nohlangothi oluseceleni endololwaneni nasemikhonweni yakho yomibili kuyabandakanywa, kodwa lokhu kumane nje kuyisiqalo seqhwa futhi kunabanye abaningi esingakwazi futhi okufanele sibasebenzise futhi. Lolu hlelo luhlukaniswe ngamazinga wobunzima ahlukene ama-5 ukuze ukwazi ukulufanisa nekhono lakho nezinga lokubekisa.
Kufanele ngenze kangaki ipulangwe eliseceleni?
Phumula imizuzu engu-1-2 phakathi kwesifunda ngasinye. Ngesikhathi sesifunda sokugcina, phumula imizuzwana engama-30-60 phakathi kokuzivocavoca ngalunye. Zonke izivivinyo zibanjelwa isikhathi. Qiniseka ukuthi wenza ipulangwe eliseceleni, ipulangwe lesando, nepulangwe lentambo yomlenze ezinhlangothini zombili. Lokhu kuvivinya umzimba kungenziwa izikhathi ezingama-3-5 ngeviki inyanga eyodwa.